बुटवल । रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित क्रिमसन अस्पतालमा उपचार गराईरहेका कोरोना संक्रमित शिक्षकको मृत्यु भएको छ । गुल्मीको मदाने–६ का ४१ वर्षीय पुरूष जेठ १ गते क्रिमसन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको उनको बिहीवार बिहान मृत्यु भएको प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा.उमाशंकर चौधरीले जानकारी दिए ।
क्रिमसन अस्पतालले औपचारिक रूपमै उनको मृत्यु भएको जानकारी गराएको डा. चौधरीले बताए । उनको बिहीवार बिहान ७ बजेर १० मिनेटमा मृत्यु भएको डा. चौधरीले जानकारी दिए । बुधवार मृत्युको खबर आएपछि खण्डन गरेको अस्पतालले विज्ञप्ति निकाले पनि मृत्यु भएको सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन । उनले शव व्यवस्थापनको तयारी थालिएको र शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । मृत्युको औपचारिक जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिने भएकाले अस्पतालले विज्ञप्ति ननिकालेको जनाइएको छ ।
निमोनिया भएको भन्दै बिरामीको ढाडको अप्रेसन गरी पानी निकालेपछि उनी सिकिस्त बनेको उनका आफन्तले बताएका छन् । सिकिस्त अवस्थामा रहेका उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । जेठ १ गते उपचारका लागि क्रिमसन अस्पतालमा आएका उनको दुई गते स्वाब संकलन गरिएको थियो । जेठ ५ गतेमात्रै उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको भैरहवास्थित प्रयोगशालाले जनाएको थियो ।
संक्रमण देखिएपछि बिरामीको वास्ता नगरेको र चिकित्सकले नियमित निगरानी पनि नगरेको आफन्तको दाबी छ । गुल्मीमा रहेका उनमा कसरी संक्रमण भयो भन्ने अझै खुलेको छैन ।
उनी कार्यरत रहेको विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाईएकोले त्यहीँबाट संक्रमण भएको अनुमान गरिएपनि क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको परिक्षण नहुदा अन्योल छ । गुल्मीका संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिला र बाँकेका एक युवाको मृत्यु भएको थियो । तस्वीर: सांकेतिक
<<< : वाट्फोर्डका खेलाडीसहित तीन संक्रमित
जब नर्स भित्रि वस्त्रमा कोरोना संक्रमित पुरुष वार्डमा पसिन्… : >>>